Nezvedu - Bulltech
Bulltech ™ ndeye National High-tech Bhizinesi reChina. Bulltech ™ muridzi anodarika makumi matatu epatent patent, yakazvipira kuR & D, kugadzirwa nekutengesa michina yekushandisa laser, nekombuta inotungamira yemaziso uye yekudzora tekinoroji, Bulltech inopa Industrial Laser Inowedzeredza Kugadzira Solutions kune vatengi vepasirese kweanoda kusvika makore makumi maviri, kutengesa uye sevhisi network inovhara. Nyika makumi maviri nematunhu.
Bulltech ™ inopa Wedzerai Kugadzira mhinduro dzinosanganisira zvishandiso, zvinoshandiswa, zvigadzirwa zvehunyanzvi, nezvimwewo kune vatengi mune akawanda maindasitiri: Aviation, Energy, Medical, Industrial Mould, Automobile Kugadzira, Metal Kugadzira, Kushambadzira uye mamwe maindasitiri ane hukama.
NaEC, ISO, FDA yakasimbiswa, Bulltech ichaenderera mberi ichibatsira vatengi vedu kudzikisa mutengo, kugadzirisa basa nekugadzira kukosha nekutarisa tekinoroji uye kutonga kwehunhu.
Laser inoita kugadzira nyore
Inotungamira misika neCore Optical Technology uye Kudzora Technology
Isu tinoomerera kupa yemainjiniya masevhisi, kutaura mitauro mitauro uye kunzwisisa zvinodiwa nemutengi zvakajeka.
Isu tinopa zvigadzirwa uye masevhisi emhando yepamusoro nemitengo isingadhuri, izvo zvinopa vatengi vedu kukwikwidza kwakakwira mubhizinesi ravo.
Isu tinopa akanyanya kusununguka masisitimu uye mhinduro. Easy oparesheni, nyore maintanence, anoshanduka zvishongedzo izvo zvinovimbisa vatengi vedu zvakanyanya kugadzirwa uye kuwanikwa pamitengo yakaderera yekushandisa.
Isu tinoshandisa zvakanakisa zvikamu mune ino indasitiri uye zvinosanganiswa neepamusoro mhando kudzora standard uye mushure-masevhisi system kuona yakanaka uye yakagadzikana kuita kwemashini edu.
Vatengi vedu nevatengesi vanogona kuvimba nesu nekuti isu tinovapa kuchengetedzeka, kuenderera, uye kujekesa.
Isu tinopa rutsigiro rwemari kune edu anotenderwa emari vatengi kana vatengesi kuvabatsira kuti vagadzire kugwinya kwemari kuyerera neZero kufarira.